Ubukrelekrele obuBonakalayo beNetra: Jonga iliso lakho kwiBrazil ngokubonakalayo kwi-Intanethi | Martech Zone
NgoLwesithathu, Julayi 12, 2017 NgoLwesibini, Julayi 11, 2017 Douglas Karr
INetra sisiqalo sokuphuhlisa itekhnoloji yoKwamkelwa kweMifanekiso esekwe kwi-AI / kuphando olunzulu lokuFunda olwenziwe kwi-MIT's Science Science kunye neLebhu yeLebhu yeArtificial Art. Isoftware yeNetra izisa ulwakhiwo kwimifanekiso eyayingakhekanga ngaphambili ngokucacileyo ngokucacileyo. Ngaphakathi kwi-millisecond ezingama-400, iNetra inokumakisha umfanekiso ovavanyiweyo wophawu lwelogo, umxholo womfanekiso, kunye neempawu zobuso babantu.
Abasebenzisi babelana ngeefoto ze-3.5 yezigidigidi kwimidiya yoluntu mihla le. Ngaphakathi kwimifanekiso ekwabelwana ngayo ngokwasentlalweni kukho ulwazi oluxabisekileyo malunga nemisebenzi yabathengi, umdla, ukuthanda uphawu, ubudlelwane kunye neziganeko eziphambili zobomi.
Kwa-Netra, sisebenzisa i-AI, umbono wekhompyuter, kunye nokufunda okunzulu ukunceda abathengisi baqonde ngcono ukuba abathengi babelana ngantoni; Itekhnoloji yethu inokufunda imifanekiso kwisikali esikhulu ebesingenakwenzeka ngaphambili. Ukufezekisa oku, siqala ngesampulu yemifanekiso efumaneka kwi-intanethi enelogo ethile. Emva koko sithatha, yithi, ilogo yeStarbucks, kwaye siyitshintshe ngeendlela ezahlukeneyo zokwenza iseti yoqeqesho eya kuthi ivumele itekhnoloji ukuba ibone iilogo zeStarbucks eziphosakeleyo, okanye kwiindawo ezixineneyo njengevenkile yekofu. Emva koko siqeqesha iimodeli zekhompyuter sisebenzisa indibaniselwano yomxholo wezinto eziphilayo kunye nemifanekiso eguqulweyo. URichard Lee, u-CEO, uNetra
Apha ngezantsi ngumzekelo womfanekiso owafakwa kwisoftware yeNetra ukusuka kwiTumblr. Nangona i-caption ingathethi North FaceIsoftware yeNetra iyakwazi ukuskena ifoto kwaye ibone ubukho be logo phakathi kwezinye izinto ezinomdla, kubandakanya:
Izinto, izigcawu, kunye nemisebenzi enje ngeNtaba, ingqungquthela, iAventure, ikhephu kunye nobusika
Indoda emhlophe eneminyaka engama-30-39
I-logo yophawu lwasebusweni yaseNyakatho ene-99% yokuzithemba
INetra inika abathengi ukufikelela kwideshibhodi esekwe kwiwebhu ukuze bafake imifanekiso kunye / okanye bahlalutye imifanekiso yezentlalo evela kwi-Twitter, Tumblr, Pinterest, nakwi-Instagram. Isoftware iyafumaneka kwintengiso kubathengi ngedashboard esekwe kwiwebhu okanye API kwiinkampani zesoftware. Itekhnoloji ephambili yeNetra inokusetyenziswa kubandakanya isalathiso somfanekiso kunye nokukhangela (ulawulo lweeasethi zedijithali) kunye nokukhangela okubonakalayo.
Abasebenzisi banokujonga kubahlalutyi kwiithegi zemifanekiso kwaye uphendule imibuzo ephambili enje:
Uphi uphawu lwam olubonisa imifanekiso kwaye kweyiphi imeko?
Loluphi uhlobo lwabantu olubandakanya uphawu lwam kwimifanekiso?
Ngawaphi amanani abantu ababandakanyekayo kwiimveliso zokhuphiswano lwam?
Yeyiphi imisebenzi / iimveliso ngabathengi abazibandakanya negama lam abanomdla kuzo?
Abasebenzisi banokucoca imifanekiso esekwe kumanqanaba okuzibandakanya kunye nomxholo wesithombe. INetra ikwanakho nokwenza abaphulaphuli ngokwesiko labo ngokuxhomekeke kumxholo othunyelwe ngaphakathi kwimifanekiso yeendaba zentlalo. Umzekelo, uReebok unokusebenzisa isoftware ukujolisa kubathengi abasebenza ngokuzimisela ngokujolisa kwiCrossfit kubathengi abathumele iifoto zabo besenza umsebenzi wokuzilolonga kwezi veki zimbini zidlulileyo.
Siyakholelwa ukuba sinezobuchwephesha obukumgangatho ophezulu kwintengiso kunye nophawu lwemalike. Sikwahlula ngokwethu ngokuqonda ngakumbi ukubonwa kwemifanekiso. Inye kuphela enye inkampani enokwenza ii-brand, iilogo, izinto, izigcawu, kunye nabantu, kwaye oko kunguGoogle. Kwintloko yethu kuvavanyo lwentloko, siqhuba ngcono amaxesha amabini kunabo. Isisombululo sobukrelekrele esibonakalayo seNetra sinokubonelela ngedatha exabisekileyo ngendlela eyonyusa idatha yabathengi esele ikho (umzekelo, ulwazi ngeprofayili, imibhalo engezantsi, idatha yecookie) esele yenziwe ngabathengisi bezentlalo. URichard Lee, u-CEO, uNetra
Izicelo ezisebenzayo zibandakanya ukubeka esweni uphawu, ukumamela kwezentlalo, ukuxhasa intlalontle, ukuthengisa okunefuthe, uphando lwezentengiso kunye nentengiso.
Cela ukufikelela kwiNetra
tags: aiukubeka iliso kwi-brandukufunda okunzuluukuqaphela ubusoukuqonda umfanekisoinstagramyokufunda umatshininetraTwilleyprofilesukuqondareebokubuso bangasentlaTumblrTwitterukuqondwa komfanekiso obonakalayouphendlo olubonakalayo
I-ConnectLeader TopRung: I-B2B yokuThengiswa kweNtengiso kunye nesiXhobo soLawulo lweNtsebenzo